Technorati ၏ API နှင့် PHP ကိုအသုံးပြုသည် Martech Zone
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: မတ်လ 3, 2007 - Technorati အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော WordPress ပလပ်ဂင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်.
UPDATE: ကောင်းပြီ၊ Technorati တွင်နေ့စဉ်မေးမြန်းမှုကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ငါခက်ခဲလမ်းထွက်ရှာတွေ့သူတို့သည်ငါ့ကိုပိတ်ထား။ သင်ဝစ်ဂျက်ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကကုဒ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသိမ်းဆည်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည် Project စာမျက်နှာသို့ပြန်သွားသည့် link တစ်ခုဖြင့်အမှားဖော်ပြနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ငါ Daily code ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ code ကိုလည်း update လုပ်ထားတယ် API ကို ခေါ်ဆိုမှုသည်၎င်းသည်“ Add to Favorites” link သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
ကုန်သွယ်မှုအားဖြင့်ဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၌အားနည်းချက် ၂ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂဏန်းပန်းတိုင်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးစီမံကိန်းများ၊ လူများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲများစသည်တို့ကိုကောင်းမွန်စွာစုစည်းပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ align လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည် (စာအုပ်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ညာဘက်အခြမ်းမှာစီးပွားရေး၊ အောက်ခြေညာ စိတ်ကူးယဉ်။
ကိန်းဂဏန်းအမှားကြောင့်ငါ့ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း Technorati, Google Analytics နှင့် Google Adsense ကိုကြည့်နေတယ်။ Techorati ကကျွန်တော့်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားစေတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဒီဆိုက်တွေကိုသွားလည်ပတ်တာသူတို့ဘာပြောနေတယ်၊ ​​ဘာအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရတာသဘောကျတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရာထူးပြောင်းလဲမှုရှိ၊ မရှိကိုသိရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ခုခုလိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် Technorati ရဲ့ 'widget' လေးတစ်ခုကိုပရိုဂရမ်သွင်းခဲ့တယ် API ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူငါ၏အရာထူးရရှိရန်။ တကယ်တော့ဒါဟာဒီ post ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာအဆင့်ကိုပြနေတာပါပဲ။ သငျသညျပုံကိုမြင်ချင်လျှင်, ငါ့ကိုနှိပ်ပါ စီမံကိန်းစာမျက်နှာ ထ။
24:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 06
🙂 ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့ ပထမဆုံးဖြစ်လာတာလို့ ဆိုလိုတာက ငါဒီဟာကို အသေချာဆုံး ချေးခဲ့တာလို့ မင်းကို အသိပေးပါရစေ 🙂
24:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 53
ချေးပါကွာ Steven အဲဒါက ဒီဘလော့ဂ်အကြောင်းပါ။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 25 တွင်
Technorati လိုဂိုကို အသုံးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခုပုံစံက တော်တော်မိုက်တယ်။ ကုဒ်စာမျက်နှာကိုလည်း အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါတယ်။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 29 တွင်
ကောင်းတဲ့ အထိအတွေ့ 🙂
ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်၏ Site Rankings text widget တွင် ပြသထားသည် - ဟုတ်ပါတယ် 🙂
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 38 တွင်
အိုး၊ ဒါ ကြီးမားတဲ့ ခရက်ဒစ်တစ်ခုပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကို အဲဒီနေရာမှာ ထားဖို့ အတင်းအကြပ် မခံစားပါနဲ့။ ပရောဂျက်စာမျက်နှာကိုညွှန်ပြတဲ့ HTML မှာ မှတ်ချက်နည်းနည်းရှိတယ်။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 45 တွင်
စာသားအရွယ်အစားကို ပြင်လိုက်တယ် LOL ဆိုတော့ နည်းနည်းပိုကောင်းတာပေါ့။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 43 တွင်
သင့်အဆင့်နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကောင်းမွန်သောကိရိယာအကြံပြုချက်ဖြင့် ဝစ်ဂျက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သင့်ဘလော့ဂ်၏အမည် (Technorati အရ) အပြင် အဝင်လင့်ခ်များနှင့် ဘလော့ဂ်များ။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 22 တွင်
အင်း၊ အဲဒါ မြန်တယ်။ Technorati ထံမှ အမှားအယွင်းတစ်ခု ရရှိနေပါသည်-
သင်၏နေ့စဥ်ခွဲဝေပေးသည့် Technorati API မေးခွန်းများကို သင်အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။
အဲဒါကို စိတ်ထဲမှာထားပြီး၊ ငါ့ဆိုက်ကို ရိုက်မယ့်အစား လူတွေက ကုဒ်ကို သူတို့ဘာသာသူတို့ လက်ခံထားဖို့ ဒီမှာ ငါ့ပို့စ်တွေကို မွမ်းမံပြီးပြီ။ အဲဒီလူတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ 'နေ့စဉ် ခွဲတမ်း' ရှိမှန်းတောင် မသိခဲ့ဘူး။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 28 တွင်
Doug က အရမ်းမိုက်တယ် 🙂 ... အိုး.. ကြာနေချိန်မှာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ထင်ရှားကျော်ကြားမှုအချို့ကို ပြသသွားသော်လည်း Technorati သည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သတိပြုမိပြီး အလားတူတစ်ခုခုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 43 တွင်
ငါလဲဒီလိုပဲမျှော်လင့်တာပဲ။ သူတို့ရဲ့ဆိုက်ကိုဖတ်ပြီး 'နေ့စဉ်ခွဲတမ်း' က ဘာလဲဆိုတာ ရှာမတွေ့ဘူး။ နည်းနည်း စိတ်ရှုပ်စရာပါ။
ကျွန်ုပ်သည် မှတ်ချက်ပေးထားသော HTML ကဲ့သို့ အမှားအယွင်း မက်ဆေ့ချ်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကျော်ဖြတ်ရန် ကုဒ်ကို ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ယခင်က “0” ကို မဖော်ပြတော့ပါ။ အပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုရှိပါက ၎င်းသည် ဝစ်ဂျက်ကိုသာပြသပါမည်။
အကောင်းဆုံး အလောင်းအစားကတော့ သင်အဲလိုလုပ်နိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ် စာမျက်နှာကို သင်ကိုယ်တိုင် လက်ခံကျင်းပဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ 'နေ့စဉ် ခွဲတမ်း' က ဘာလဲဆိုတာ သိလာတဲ့အခါ မင်းကို ဆက်ပြီး တင်ပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စတီဗင်။
26:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 44
ကောင်းပြီ… နောက်ထပ်တိုးတက်မှုအချို့။ ကျွန်ုပ်မှလွဲ၍ အခြား widget ဖြင့် URL တစ်ခုကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အား error တစ်ခုရှိနေကြောင်း ပြောပြပြီး ပရောဂျက်စာမျက်နှာသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဒါမှ ကုဒ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင် host လုပ်လို့ရတယ်။ မည်သူမဆို ဤကုဒ်ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး ထိုနည်းအားဖြင့် သင်သည် API နေ့စဥ်ခွဲဝေမှုသို့ လည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် Daily Allotment သို့ရောက်ရှိပါက၊ ၎င်းသည် "အနှစ်သက်ဆုံးများထည့်ရန်" လင့်ခ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားစေရန် ၎င်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
27:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 44
Dapper တွေ ဘယ်လို လုပ်နေကြတာလဲလို့ တွေးမိတယ်။ တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သာ စစ်ဆေးပြီး ရလဒ်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
မည်သည့်ဆိုဒ်အတွက်မဆို Dapper Screen Scraping
မတ်လ 3, 2007 မှာ 6: 43 pm တွင်
ကောင်းပြီ လူတို့! ဒါကို WordPress ပလပ်အင်တစ်ခုအဖြစ် လုံးလုံးလျားလျား ပြန်ရေးပြီးပြီ၊ Wooooo!
Technorati အဆင့် WordPress ပလပ်အင်
မတ်လ 10, 2007 မှာ 2: 56 pm တွင်
Technorati အတွက် မင်းရဲ့ addon လေးကို ငါရှာတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် PHP5 ကို install လုပ်ပြီးချိန်မှာ ငါ့ဆာဗာမှာ cURL compiled မရှိဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ဒါဆို ဒီတစ်ခု အလုပ်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာ ငါကြည့်မယ်။ http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ PHP5 မသုံးတဲ့သူတွေအတွက် ကူညီပေးလိုက်တာ
မတ်လ 10, 2007 မှာ 5: 21 pm တွင်
အိုး Tyler! cURL သည် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသော်လည်း အချို့သောလူများက ၎င်းတို့အတွက် ၎င်းကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သဘောမပေါက်ပါ။ PHP ထည့်သွင်းမှုများဖြင့် မူရင်းအတိုင်း တင်ထားသည့် စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဟု ကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်။ ငါခန့်မှန်းခြင်းသာဖြစ်သည် - သို့သော် Samanthon သည် cURL ကိုလည်းအသုံးပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 10, 2008 မှာ 3: 44 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ဒါက ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ကူညီပေးတယ်။
အခု ကျွန်တော် အဲဒါကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ လိုတော့တယ်၊ အဲဒါက ပြီးပြည့်စုံရမယ်။
17:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 20
အမှန်တကယ် ကန့်သတ်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ဘယ်သူက သိလဲ။ အက်ပလီကေးရှင်းကို စမ်းသပ်ရတာလည်း ခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်းကို သိလိုက်ရတယ်။
17:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 24
အိုး အဲဒါ 1000 ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်... အိုး၊ ဒီနေ့ ငါ တကယ် 1000 queries လုပ်ခဲ့တာလား။
17:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 02
guitarnoize - လွယ်ကူသော caching ယန္တရားကို တစ်မျိုးမျိုးထားရန် သေချာပါစေ။